I-KN95 Kn95 imaski yokuvikela
Imaski yokuvikela engu-N95
Imaski elahlekayo yezokwelapha
Ulwazi lokuvikela ukuzivikela kwezifo
Ulwazi lokuvikela ubhubhane abanye abantu asebevele basebenzile noma kungekudala abazosebenza ngalo, ekuqubukeni kwamanje okufanele bakwenze? 1. Ungayigqoka kanjani ngokufanele imaski yokuhlinza esendleleni eya emsebenzini.Zama ukungasebenzisi izithuthi zomphakathi, kunconyelwa ukuhamba, ukuhamba ngesithuthuthu noma ukuthatha imoto yangasese, ibhasi elivaliwe ukuze usebenze.Uma u ...
Ukunqoba lokhu kuvimbela ubhubhane futhi ulawule impi, iphuzu eliyisihluthulelo “ukuvikela”
Ukunqoba lokhu kuvimbela ubhubhane futhi ulawule impi, iphuzu elibalulekile "ukuvikela". I-WHO isimemezele ubhubhane lwe-coronavirus pneumonia njengesifo “esiwubhubhane”. Imaski emincane idonse izigidigidi zabantu emhlabeni wonke. Ngemuva komaskhi omncane uchungechunge lokukhiqiza nokukhiqiza kanye ne ...
izinyathelo zokuvikela imaskhi
Geza izandla zakho ngaphambi kokugqoka imaskhi noma uvikele ukuthinta ingaphakathi kumaskhi ukuze unciphise ubungozi bokungcola. Hlukanisa ingaphakathi nengaphandle kwe-maski, phezulu nokungaphansi. Musa ukusebenzisa isandla ukudonsa imaski, imaski engu-N95 ingakwazi ukwahlukanisa igciwane ebusweni bemaskhi kuphela, uma ...
Ikheli: No.302 Guiyue Road, eGuanlan
Umakhala ekhukhwini: 13751122484
Umakhala ekhukhwini: 18718931851
Umakhala ekhukhwini: 18123747257